Mapepa maviri emabhaisikopo, mumhanzi uye mavhidhiyo akaunganidzwa | Linux Vakapindwa muropa
Kunze kwekutarisira kuunganidzwa kwemamuvhi, Kodi inokutendera iwe kuti uvaridze.
Kunyangwe vazhinji vashandisi isu takachinjisa kumasevhisi ekushambadzira seNetflix kana Spotify (tiri vanhu vanoteerera mutemo vasingazomboshandisa Popcorn Nguva uye hatichazomboishandisa zvakare kune avo vanosarudza kuramba vaine yavo multimedia zvemukati zvakachengetwa pane rakaoma dhiraivhu. Mune ino post ini ndichataura maficha angu maviri andinofarira ekugadzirisa bhuku, mumhanzi uye kuunganidzwa kwevhidhiyo.
Ini ndinofanira kukumbira ruregerero nekushaikwa kweakatanga mumazano. Pfungwa yeichi positi yakazvarwa apo mumwe munhu paakandiudza kuti akakwanisa yake yakawanda dhisiki kuunganidza achishandisa Excel. Kazhinji ini ndinofarira vanhu vanoshandisa chirongwa chakanyanya kugadzikana kwavari. Asi, kana iwe uine maneja wedhatabhesi senge Kuwana muhofisi imwechete suite iwe yauri kubhadhara Microsoft, usatarisira kuti vave nemafungiro akanaka ehungwaru hwako. Ini ndanga ndoda kukuudza nezve yemahara uye yakavhurwa sosi dzimwe nzira, asi ndakasarudza kwete.
Ndakaenda, ndichifunga kuti zvaive zvakanaka kugovana mazano angu nevanhu kuti vakwanise kuvakoshesa. Muchikamu chino ndiri kutaura nezve mapurogiramu maviri ekugadzirisa chaiwo maunganidzwa. Mune iyo inotevera ini ndichataura pane zvirongwa zve manejimendi eunganidzwa zvakazara. Kunyangwe ivo vachizivikanwa kune vazhinji vashandisi veakavhurika sosi mapurogiramu, ini ndinovimba kuti vateresi vane zvishoma zvishoma zvakajairika njere kupfuura shamwari yangu vanozovawana vachishanda.
1 Kugadzirisa kuunganidzwa kwemabhuku neCaliber
2 Kugadzirisa mimhanzi uye vhidhiyo kuunganidzwa neKare
Kugadzirisa kuunganidzwa kwemabhuku neCaliber
Tinogona kupedza maawa tichikurukura kuti ndeipi yakanakisa browser. Chokwadi taizouya pakurohwa tichiedza kusarudza kuti ndeipi yakanakisa kugovera kweLinux. Asi chinhu chimwe ndechechokwadi. Iko hakuna chishandiso chiri nani kupfuura Caliber yekutarisira kuunganidzwa kwemabhuku.
Pakati pezvinhu zvaro zvinonyanya kukosha tinogona kutaura:
Es yakawanda chikuva. Iyo kunyange ine inotakurika vhezheni iwe yaunogona kushandisa pane pendrive.
Inobvumira chinja mabhuku pakati pemafomati akakurumbira uye gadzirisa iyo yakashandurwa faira kune skrini yemidziyo yakasiyana nhare.
Dhawunirodha metadata yemabhuku kubva paInternet kana titendere kuti tigadzire nenzira yakasarudzika.
Ane a injini yekutsvaga ine simba.
Inoita kuti zvive nyore kutenderera zvirimo pakati pezvigadzirwa zvisina waya kana wired.
Iyo ine mupepeti uyo unotibvumidza isu kuti tigadzire isu pachedu mabhuku emagetsi.
Yaro e-bhuku rinoona rinotendera iwe kuti uchinje typography uye kumashure uye mavara mavara.
Dhawunirodha zvirimo kubva kuThe Economist, New York Times, New Yorker Magazine, The Guardian, BBC News, National Geographic, CNN, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Atlantic, Scientific American, Wired Magazine, The Telegraph, Forbes, Ars Technica uye chero imwe RSS feed yatinowedzera.
Inobvumira gadzira makopi ekuchengetedza kubva mubhuku redu rekuunganidza.
Kunyangwe Caliber iri mumatura eiyo makuru ekuparadzira kweLinux, ivo havawanzove neiyo yepamusoro-yemhando vhezheni. Ndakaivandudzar ndeye kushandisa rairo yakaratidzwa pane yavo kurodha peji.
Kugadzirisa mimhanzi uye vhidhiyo kuunganidzwa neKare
Mune yangu chaiyo kesi, Guvva Zvakafanana nekushandisa iyo Ferrari kuenda kuCarrefour. Asi kana uine muunganidzwa wakakura wemimhanzi kana mavhidhiyo, unofanirwa kunge watove neakaiswa. Uye ini handitombo kukuudza kana iwe uchikwanisa kupira chishandiso chete pachirongwa.
Kodi inobvumira tamba odhiyo, vhidhiyo, podcast uye mamwe marudzi edhijitari zvemukati, zvese zvakachengetwa imomo uye online.
Panyaya yemafaira ekuteerera, Kodi unogona kutamba mafomati anozivikanwa. kusanganisira mp3, flac, wav uye wma. Iyo ine yakanaka tag yekutsvaga injini uye inobvumira kune smart playlist zvisikwa.
Kana iwe uchida mafirimu, nechirongwa ichi pUnogona kutarisa mafirimu online kana kutarisa iwo awakachengeta. Kana iwe ukaisa anoenderana plugins iwe unogona tsvaga uye tora pasi manyorerwo.
Iyo terevhizheni inoratidza raibhurari inotsigira Chikamu uye mwaka maonero nema poster kana mabhena, zvinyorwa, zvirongwa zvehurongwa, uye vatambi.
Nezve mafoto, ivo vanogona kuunzwa kunze uye kunoonekwa sehurukuro.
Kodi inokutendera iwe tarisa uye nyora mhenyu TV kubva nyore-kushandisa interface. Inoshanda nenhamba dzinoverengeka dzakakurumbira, kusanganisira MediaPortal, MythTV, NextPVR, Tvheadend, uye zvimwe zvakawanda.
Iyo purogiramu ine chinongedzo chiri kure chinotibvumidza isu kuti tishandise icho kubva kubhurawuza yemamwe madivayiri.
Nekuisa zvinowedzera-tinogona kuwana mamwe mabhenefiti. Zvisinei unofanira kungwarira. Iwe unongofanirwa kuisa izvo kubva kune yepamutemo peji.
Paive nechinetso neKapa neLinux kugoverwa uko kunosunungura miteuro mitsva nguva nenguva. Kuenderana kusapindirana. Asi izvo zvakagadziriswa sezvo Kodi iripo muFlatpak fomati.
Ehe pane zvakawanda zvimwe zvingasarudzwa. Kubata mimhanzi chete ndizvo Rhythmbox, Amarok o Banshee. csBook Iine zvese zvaunoda kana Caliber inoita senge yakawandisa kwauri. Plex Iyi imwe nzira yakanaka kune Kodi, kunyange hazvo mamwe maitiro achibhadharwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maapplication angu maviri aunofarira ekugadzirisa bhuku, mumhanzi, uye kuunganidzwa kwemamuvhi.
"Tiri vanhu vanoteerera mutemo avo vasingazombofi vakashandisa Popcorn Nguva zvakare .."
"Usatarisira kuti ndive nepfungwa yakanaka yehungwaru hwako."
Anodiwa, kuve pedantic kwakanaka kune ane makore gumi nemashanu. Kunze kwekunge uri iwo zera, ruregerero rwangu.
Gentleman, kana ukaverenga chirevo chekutanga zvakare, unonyatsonzwisisa kuti idambe.
Nezve wechipiri, ini ndine mvumo yekuva nemafungiro nezve kugona kwepfungwa kwevamwe vanhu, sezvo uine mvumo yekuva nemafungiro pamusoro pezvandinokurudzira kuita zvimwe zvirevo.
Ndatenda zvikuru nemhinduro yako
Robert Ronconi akadaro
- Unganidzo yemabhuku edhijitari: Caliber http://calibre-ebook.com/ uye iyo Zotero bibliographic rejista maneja https://www.zotero.org/
- Muunganidzwa weMuvhi: Vhidhiyo Player iye wemasimba ese VLC Media Player https://www.videolan.org/vlc/index.es.html uye sekatalog Tiny Media Manager https://www.tinymediamanager.org
- Muunganidzwa weMimhanzi: MusicBrainz Picard https://picard.musicbrainz.org/ uye NyoreTAG https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG uye semutambi waClementine
Pindura kuna Roberto Ronconi
Ndatenda zvikuru nemupiro